आफ्नो तटस्थता को विरोध गर्न सतावट को अधिकार - रब्बी माइकल अब्राहम
सताउनेको अधिकार उसको तटस्थीकरणको विरोध गर्ने
प्रतिक्रिया > श्रेणी: हलचा > सताउनेको अधिकार उसको तटस्थीकरणको विरोध गर्ने
रमाहट २ महिना अगाडि सोधेको
जाहिर छ यदि सताउनेलाई बेअसर गर्ने सबैको लागि मित्ज्वाह छ भने, त्यहाँ सताउने आफैंलाई तटस्थताको विरोध नगर्ने मित्वाह छ? वा सताउनेसँग अझै पनि तटस्थीकरणको विरोध गर्ने अधिकार छ (र तटस्थकर्तालाई मार्ने बिन्दुसम्म पनि)? मलाई लाग्छ कि हत्याराको मिश्ना टोरा कानून र आत्माको संरक्षण, अध्याय ए मा यसको कुनै सन्दर्भ छैन।
प्रश्न ट्यागहरू: पछ्याउने
यो कुरा गायकहरूमा देखिन्छ। गेमारा भन्छन् कि यदि उसले पिन्चासलाई सताउने राज्यबाट पल्टाएर मारेको भए उसलाई छुट दिइने थियो। र मालम एफए महलमा एक हत्याराले यस कानूनको विस्तारको बारेमा छलफल गर्दछ (के रगतको मुक्तिदातालाई मार्ने आकस्मिक हत्याराको बारेमा, र दोस्रो पदमा दूतलाई मार्नेलाई पनि छलफल गर्नुपर्दछ)।
उत्पीडकलाई मार्ने अधिकार नभएजस्तै तटस्थताको विरोध गर्ने अधिकार छैन। वास्तवमा उसले आफैंलाई सताउने अवस्थाबाट (वा अवश्य पनि सताउन बन्द) बाट आफूलाई मार्नुपरेको थियो। यसरी मैले यहाँ केहि हप्ता अघि बिडीमा दूतमा उसलाई मार्ने अनुमति छैन भन्ने कानूनको व्याख्या गरेको छु किनकि प्रतिवादीले आफैंले आत्महत्या गर्नुपर्छ। अपराधीहरूलाई मार्नु भनेको जनतामा लादिएको मित्भा हो, र B'D मेसेन्जर सबैको सन्देशवाहक हो (सतावटमा परेकाहरू सहित)।
थप 3,088 सदस्यहरू सम्मिलित हुनुहोस्
हामी किन विश्वास गर्छौं भन्ने प्रश्नमा दर्शनको महत्त्व
अभागी म उनको मृत्युको समयमा त्यसमा बसें।
सबै इन्जिनियर गरिएको छ। सबै प्रकारको लेखाको लागि के सान्दर्भिक छ?
हानानेल मा के इरान यहाँ छ? प्रगतिशीलता र विवेकशील उदारवादमा (स्तम्भ ४८३)
मिची मा चुनावको जवाफ दिनुहोस्
र सायद यो C को लागि मतदान गर्न लायक छ? मा चुनावको जवाफ दिनुहोस्
यो राम्रो को लागी हुन सक्छ मा के इरान यहाँ छ? प्रगतिशीलता र विवेकशील उदारवादमा (स्तम्भ ४८३)